Dood kale oo ku soo korortay doorashooyinka dalka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dood kale oo ku soo korortay doorashooyinka dalka
Dood kale oo ku soo korortay doorashooyinka dalka
Iyadoo muddooyinkiii ugu dambeysay uu khilaaf raggaadiyay arrimaha doorashooyinka ee dalka ayaa waxaa muuqata in dood kale ku soo korortay, taa oo ka dhalatay goobta ay tahay in lagu qabto shirkii ugu dambeeyay, ee madaxda kaga arrinsaneyso halka looga gudbayo isgoyska la taagan yahay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Talaadadii shir isugu yeeray Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, shirkaas oo uu iclaamiyay in 15-ka bishan ka furmi doono Magaalada Garoowe.
Maamulka Puntland ayaa markale ka horyimid in shirka wadatashiga Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada lagu qabto Magaalada Garoowe.
Dr. Xasan Cabdi Xayle oo fallanqeeya arrimaha gobolka ayaa ka hadlay sababta keeni karta in Puntland cusleysato in shir ceynkani ah lagu qabto Garoowe.
“Maadaama doodaha ay qayb xoog badan ka yihiin khilaafaadkan hadda ugu dambeeyay ee shirkii Dhuusamareeb lagu qabtay, Madaxweyne Farmaajo iyo ayaga laba dhinac ayay kala ahaayeen, haddana waa dhici kartaa inay arkayn in aysan ku habooneyn, maadaama arrinta oo weli taagan in ayagu ay martigeliyaan, waayo haddaad martigelido waxyaabo badanaa ka xishooneysaa ama tallaabo badanaa aad gadaal u qaadeysaa, way dhici kartaa dhinacaas inay tahay.” Ayuu yiri Dr. Xasan Cabdi Xayle.
Xayle ayaa yiri “Way dhici kartaa sida ay ayaga wax u arkaan oo ah in Xamar shirka lagu qabto oo leeskugu yimaado, qaybaha kale ee illaa hadda aan shirka laga soo qaybgelin, lagama maarmaankana ay tahay in sida loo heshiinayo ay qayb ka noqdaan, waxaan u jeedaa xoogag kaloo siyaasadeed, mucaaradka, bulshada rayidka ama waxgaradka kale ha noqdaan ama Labada Gudoomiye ee Baarlamaanka, qaybo badanoo dowladda, mucaaradka iyo bulshada rayidka ka mid ah inay isugu yimaadaan shirkaas.”
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe ayaa Arbacadii sheegay in diidmada Puntland ay u arkayaan mid markale lagu curyaaminayo dadaalada xalka loogu raadinayo in dalka ay doorasho ka dhacdo.
“Waxaan is leenahay runtii inaanay maanta u baahneyn in lugta la jiido, waxaanu u fahmeynaa 6-dii bilood ee soo socotay, sidii lugta loo jiidayay doorashada in illaa hadda loo jiidayo lugta, laakiin Dowladda Federaalka iyo madaxdeeda waxaa ka go’an in shir leeskugu yimaado oo Garoowe leeskugu yimaado 15-ka bishan, si loo fuliyo heshiisyadii 17-kii September, dalkuna uu doorasho u aado.” Ayuu yiri Wasiirku.
Maamulka Jubbaland iyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa taageeray soo jeedintii Puntland ee ahayd in shirka uu ku baaqay Madaxweynuhu lagu qabto Magaalada Muqdisho, kana soo qaybgalaan dhammaanba dhinacyada siyaasadda.
Si rasmi ah looma oga sababta ay Dowladda Federaalka iyo darafka kale uu midba midka kale u diidan yahay in shirka lagu qabto Garoowe ama Muqdisho, waxaase loo fasirtay mid salka ku haysa arrimo siyaasadeed.
Previous articleMadaxweyne Guudlaawe oo xalay casho u sameeyay Xildhibaanada (SAWIRRO)
Next articleSheeko layaab leh: Coronavirus oo dhan waxaa qaada gasaca Coca Cola